Shabakada Migraweb waxa aasaasay oo sameyay ururka la yiraahdo Web for Migrants (WFM). Ururka WFM waa heyad aan laheyn qasdi dhaqaale ama ganacsi, sida ku saleysan qodobka 60aad ee qaanuunka madaniga ah ee u degsan Swiiska. Ururku waa dhexdhexaa oo aan siyaasad gelin.
Xubnaha ka tirsan WFM waxa ka mid ah : Ururada laajiinta oo ay ka midyihiin golaha xiriirka iyo isdhexgalka laajiinta ama ajnebiga iyo bulshada Swiiska (FIMM) iyo Centre Patronal Lausanne/Bern iyo ururka xal- u- doonka bulshada oo ku takhasusay hab maamul wanaaga bulshada. Tababarka iyo diyaarinta la taliyeyaal u heegan ah arimaha bulshada, waxa u xilsaaran macalimiin ka tirsan heyadda loo yaqaan Gacanta Fidsan (La main tendue).
Qasdiga loo aasaasay WFM waa in la geesigeliyo iskaashiga iyo isdhexgalka, ajnebiga ama qaxootiga iyo bulshada Swiiska ayada oo la adeegsanayo teknooloojiyada cusub ee warbaahinta iyo isgaarsiinta (ICT) iyo in la isuxilsaaro in lagu soo xiro ajaaniibta qalabka warbaahinta iyo Dijitaalka (dijital). Ayada oo lala kaashaneysa xubnaha ka tirsan, WFM waxay sameysay shabakada www.migraweb.ch, kaas oo sahlaya in wararka loogu baahinayo jaaliyadaha luqadahooda hooyo.
Taageero lagu geesigelinayo dadaal madaxbaaan
Migraweb waxa loo habeyay loogu na talogalay in uu taageero jaaliyadaha ajnebiga ah ee si madaxbanaan dadaal dheeraad ah u muujiyay. Ajaaniibta sida wacan ula qabsaday nolosha iyo isdhexgalka Swiiska, waxay irdaha Swiiska u fureen dadka ay isku jinsiyadda yihiin, waxay na si iska wax u qabso ah ugu tarjumaan dadkooda. Waxa kale oo ay dhinac kasta ka kaalmeyaan dadka ay isku wadanka yihiin oo ay kala taliyaan sidi ay ula qabsan lahaayeen nolosha iyo degenaashaha Swiiska.
Mashruuca isku xirka
Migraweb wuxu isku xiray oo uu xiriir toos ah u sameyay jaaliyadaha ajnebiga ah iyo ururada bulshada madaniga ah ee ka jira Swiiska sida : ururada dadka waayeelka ah, ururka dhalinyarada, ururka wax iibsadayaasha si aan beeca loogu khiyaamen, ururka u dooda ijaar bixiyeyaasha, ururka hantiileyaasha, ururka shaqaalaha, iwm. Miraweb wuxu kale uu isku xiraa maamulka dowliga ah iyo bulshada, sida xafiisyada qaabilsan qaxootiga iyo ajnebiga, xafiisyada qaabilsan isu soo dumidda iyo isdhexgalka bulshada, aydoo faafaahineya sida ay u shaqeyso heyad kasta. Waxay xiriir iyo wada shaqeyn dhexdhigtaa ururada iyo jaaliyadaha ayadoo u baahineysa bulshada waxqabadka iyo dadaalka ururada ajaaniibta.
Isdhexgalka iyo la qabsiga bulshda
Keydka ama matxafka lagu keydiyo waxayaalo badan ee ku saabsan isdhexgalka iyo habka wada noolaashaha bulshada, waxay u ogolaaneysaa heyadaha ama ONG in ay baahiyaan waxqabadkooda ayada oo aan laheyn ama laga gudbay dhibaato luqadeed. Motoorkaas oo luqado badan wax lagu baaro ayaa u ogolaanaya in ay jaaliyaduhu si deg- deg ah oo sahal ah isu dhexgalaan.
Madaxa xafiiska mashruuca